काँग्रेस सच्चिनुपर्छः खड्का - Pradesh Today काँग्रेस सच्चिनुपर्छः खड्का - Pradesh Today
फागुन २०, २०७६ टेकबहादुर पुन
अमिलियामा खुमबहादुरको शालिक राखिदै …
लमही, २० फागुन । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाङको अमिलियामा काँग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको शालिक राखिने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको अगुवाईमा खड्काको शालिक निर्माण गर्न लागिएको शालिकको सोमबार काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिलान्यास गरेका छन् ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ अमिलियामा चाँदनी चौकमा खड्काको शालिक रहने भएको हो । वैदिक विधिअनुसार शालिकको शिलान्यास गरिएको हो ।
शालिक निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस क्षेत्र नम्बर १ दाङले संयोजन गर्नेछ । शिलान्यास कार्यक्रममा सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री खड्काले सबैको प्रेरणाको स्वरूप रहेका स्व. खुमबहादुर खड्काको सिद्धान्त, विचार र समर्पणलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्न नसकिए त्यो अन्याय हुने बताए । उनको विचार र सिद्धान्तअनुरूप अबको काँग्रेस चल्नुपर्ने बताए ।
खड्काको सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै काँग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बताए । अधिनायकवाद वर्तमान सरकारले जनतालाई निरास बनाएको बताए । महामन्त्री खड्काले स्व. खड्का जीवित भईदिएको भए जनताले खुसीको अनुभूति गर्न पाउने विश्वास दिलाए ।
उनले स्मरण गर्दै भने ‘पार्टीको अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने पहिलो नेता हुनुहुन्थ्यो, छरिएर हैन जहिले एकता भएर बढ्नुपर्छ भन्दै आफै डो¥याएर हिड्नु हुन्थ्यो, उहाँको देहान्तले पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।’
महामन्त्री खड्काले पछिल्लो समय काँग्रेसको भित्रि समस्याका कारण हार ब्यहोर्नु परिरहेको र जसको समाधान आपसी छलफल बेगर नहुने धारणा राखे । ‘काँग्रेससँग जनताको गुनासो छैन,
हाम्रो व्यवहार र आचरणसँग गुनासो छ खड्काले भने– काँग्रेस सच्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिपक गिरीले काँग्रेस बचाउन सबै एक हुनुपर्ने बताए ।
उनले गुटका कारण पार्टी बिग्रिएको र निर्वाचनमा समेत हार व्यहोर्नु परेको भन्दै एक हुनुको विकल्प नभएको बताए । उनले दाङमा खुमबहादुर खड्काको देन वर्णन गर्न नसकिने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य डिला पन्त सँग्रौलाले खुमबहादुर खड्काको अभावमा अहिले काँग्रेस अभिभावकबिहीन जस्तो भएको बताइन् । हिन्दू राष्ट्र मुद्दा छोडेर नै आज काँग्रेस देशको दोस्रो पार्टी भएको सँग्रौलाको ठहर छ ।
नेपाली काँग्रेस दाङका जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय सभापतिहरू जगतबहादुर खड्का,
भूपबहादुर डाँगी, भेषराज पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टीलाई परिवारवादबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले क्षमतावान कार्यकर्ताहरूलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा खुमबहादुरका छोरा अनुराग खड्का, जिल्ला कार्यसमिति पूर्वसचिव कमल किशोर घिमिरे, प्रदेश जानकीलाल बस्नेत, भरत न्यौपाने, पूर्व साँसद सुशीला चौधरीले पूर्व सञ्चार तथा राज्यमन्त्री तप्तबहादुर विष्ट, संविधानसभा सदस्य राजु खनाल, बुद्धिराम भण्डारी,
प्रदेशसभा सदस्यहरू अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, दाङका पूर्व सभापतिहरू मोहनलाल वली, घनश्याम रेग्मी, बिरकेश्वरी गौतम, गेहेन्द्र गिरी, डढेल्धुरा पार्टी सभापति कर्ण बहादुर मल्ललगायतले मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।
एक वर्षमा नै शालिक निर्माण पूरा हुने काँग्रेस दाङले जनाएको छ । अमिलियाको चाँदनी चोकमा खड्काको शालिक निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सो अवसरमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर १ सय २० जना नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । नेपाली काँग्रेस दाङका सदस्य कमान सिंह भारतीको स्वागत मन्तब्यबाट शुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन काँग्रेस दाङका जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले गरेका थिए ।
घोराहीमा तीज महोत्सव